GIF कसरी क्रप गर्ने: GIF कसरी क्रप गर्ने भन्ने बारे सजिलो ट्यूटोरियल | अनलाइन क्रिएटिभहरू
GIF ढाँचाहरूसँग काम गर्ने डिजाइनरहरूको विशाल बहुमत, तिनीहरूले यसलाई अनलाइन विज्ञापन मिडियाको लागि स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यस अवस्थामा, हामी वेब पृष्ठ वा ब्यानर के हुन सक्छ भन्ने बारे कुरा गर्दैछौं।
थोरैलाई के थाहा छैन कि ट्रिमिङ पनि यी ढाँचाहरूको सम्पादनको भाग हो। यस पोष्टमा, हामी तपाईंलाई GIF विस्तार र ढाँचाको बारेमा मात्र जानकारी दिने छैनौं, तर, हामी तपाईंलाई केही सरल चरणहरू देखाउँछौं, कसरी GIF क्रप गर्ने।
जे होस्, हामी तपाईंलाई हामीसँग अन्त्यसम्म रहन र यस ढाँचाका रोचक पक्षहरू पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछौं।
2 GIF क्रप गर्ने विभिन्न तरिकाहरू
2.1 म्याक र विन्डोजमा
2.1.1 चरण 1: कार्यक्रम स्थापना गर्नुहोस् र GIF आयात गर्नुहोस्
2.1.2 चरण 2: GIF क्रप गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्
2.2 gifs मा
2.3 Ezgif मा
2.4 एडोब फोटोशपमा
3 सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम
तपाईंहरू मध्ये जो GIF ढाँचासँग परिचित हुनुहुन्न, यसलाई ढाँचा शैलीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जुन PDF, JPG वा साधारण TIFF जस्ता अरूसँग पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ।
यसको नामकरण "बाट आएको हो"ग्राफिक्स इन्टरचेन्ज ढाँचा ». यस ढाँचाको विशेषता के हो भने यो बिटम्यापबाट आउँछ जुन 8 बिट प्रति पिक्सेलसम्मका छविहरूसँग उपयुक्त छ। .gif फाइल एक्सटेन्सन प्राय: वेबमा फाइल ढाँचा स्रोतको रूपमा र सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरूमा स्प्रिट्सको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
सबैभन्दा अद्वितीय गुण द्वारा स्वामित्वमा GIF फाइल ढाँचा यो हो कि यसले हानिरहित कम्प्रेसन मेकानिज्म प्रयोग गर्दछ। नतिजाको रूपमा छवि गुणस्तरमा कुनै प्रभाव छैन। खेल अनुप्रयोगहरूको लागि एन्कोडिङ गर्दा, GIF ढाँचा ठूलो प्रयोगमा आउँछ किनभने यसले सजिलैसँग कम-रङ स्प्राइट डेटा भण्डारण गर्छ।
हामी धेरैजसो सामाजिक सञ्जालहरूमा GIF हरू फेला पार्न सक्छौं र तिनीहरूसँग छिट्टै सूचना प्रसारण गर्ने मौलिक विशेषता छ, साथै भावनाहरू। GIFs द्वारा प्रदान गरिएका अन्य सुविधाहरू समावेश छन्:
यसमा हल्का ढाँचा छ, जसले यसलाई कुनै पनि उपकरणमा प्ले गर्न अनुमति दिन्छ।
उनीहरूसँग ध्यान आकर्षित गर्ने उच्च क्षमता छ र उनीहरूले के व्यक्त गर्न खोजिरहेका छन् भनेर द्रुत र सहज रूपमा बुझ्न अनुमति दिन्छ।
तिनीहरूले कुख्यात र संलग्नता उत्पन्न गर्छन्। यो चाँडै एक अवधारणा संग सम्बन्धित र लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्न एक तरिका हो।
तिनीहरू एक ढाँचा हुन् जसमा भाइरलाइजेशनको लागि ठूलो क्षमता छ।
GIF क्रप गर्ने विभिन्न तरिकाहरू
GIF क्रप गर्न सक्षम हुन विभिन्न तरिकाहरू वा विधिहरू छन्। हामी यो कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्छौं:
म्याक र विन्डोजमा
प्रसिद्ध Vidmore Video Converter एक उत्कृष्ट डेस्कटप कार्यक्रम हो जुन GIF हरू सम्पादन गर्न, मिडिया सामग्री रूपान्तरण गर्न, र भिडियोहरू बढाउनका लागि शक्तिशाली सुविधाहरूको साथ आउँछ। यो GIF हरू काट्न सक्षम छ जहाँ तपाईं GIF लाई धेरै खण्डहरूमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाईंले GIF बाट कुन भाग छोड्न चाहनुहुन्छ भनेर पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि तपाइँ GIF लाई सजावट वा सम्पादन गर्न चाहनुहुन्छ वा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ यो प्रकार्य प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ सम्पादन गर्नुहोस् उपकरण को। यहाँ हामी तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर देखाउँछौं।
चरण 1: कार्यक्रम स्थापना गर्नुहोस् र GIF आयात गर्नुहोस्
स्रोत: PoPro डाउनलोडहरू
सुरु गर्नु अघि। यो कार्यक्रम स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ, जसको साथ हामी काम गर्न जाँदैछौं। पहिले तपाइँ यसलाई तपाइँको PC मा डाउनलोड र स्थापना गर्न आवश्यक छ। एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई स्थापना र तयार गरिसकेपछि, कार्यक्रम चलाउनुहोस् र ट्याबमा जानुहोस् Caja de herramientas र चयन गर्नुहोस् GIF निर्माता।
सफ्टवेयर सुरु गरेपछि, तपाईंले काट्न वा विभाजन गर्न चाहनुभएको GIF आयात गर्नुहोस्। र एकचोटि तपाइँसँग यो छ, मा क्लिक गर्नुहोस् GIF मा भिडियो y तपाईले कुन GIF लाई प्रशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर निर्णय गर्नुहोस्।
चरण 2: GIF क्रप गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्
GIF क्रप गर्न, बटन क्लिक गर्नुहोस् काट्नुहोस् GIF क्रप गर्न। यस विन्डोबाट, तपाईंसँग खण्डहरू थप्न र समयको फरक लम्बाइ निर्दिष्ट गर्ने विकल्प छ। अर्को, तपाईंले कुन फ्रेम काट्नु पर्छ निर्णय गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् रद्दीटोकरी पूर्वावलोकन फलकमा।
हामीले सकिसकेपछि, बटन थिच्नुहोस् बचत गर्नुहोस् हामीले गरेका परिवर्तनहरू लागू गर्न। यस पछि, तपाइँ आउटपुट ढाँचा अनुकूलित गर्न वा लुप एनिमेसन सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइलको गन्तव्य सेट गर्नुहोस् र त्यसपछि थिच्नुहोस् GIF उत्पन्न गर्नुहोस् र अन्तिम परिणाम बचत गर्नुहोस्।
GIFS.com एक अनलाइन अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई वेब पृष्ठबाट सीधै GIF हरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले उपकरणमा आफ्नो फाइल अपलोड गरेर यसको ड्र्याग र ड्रप इन्टरफेसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले पहुँच गर्न सक्ने विभिन्न GIF सेटिङहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ, जस्तै उपशीर्षकहरू, छविहरू थप्ने, भिडियो ट्रिम गर्ने, र अन्य धेरै। यद्यपि, तपाईंले यो कार्यक्रम प्रयोग गर्दा GIF साइज क्रप गर्न सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ। माथिको उपकरण यस विशिष्ट आवश्यकताको लागि उपयुक्त अनुप्रयोग हो। यो कसरी काम गर्छ भनेर पत्ता लगाउन, हामी तपाईंलाई एउटा संक्षिप्त सन्दर्भ गाइड देखाउँछौं।
चरण 1. उपकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यसपछि स्थानीय फोल्डरबाट यस अनलाइन अनुप्रयोगको इन्टरफेसमा GIF लाई तान्नुहोस् र ड्रप गर्नुहोस्।
चरण 2. बायाँ खण्डमा, तपाइँ विभिन्न अनुकूलन उपकरणहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ र थप रूपमा, तपाइँ क्याप्शनहरू, स्टिकरहरू, स्पेसिङ समायोजन, आदि थप्न सक्नुहुन्छ।
चरण 3. प्रक्रिया सुरु गर्न, तपाईंले क्रप नियन्त्रणको सुरु र अन्त्य बिन्दुहरू तान्नुहोस्। त्यसपछि इन्टरफेसको शीर्ष दायाँमा GIF सिर्जना गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाइँ भिडियोलाई GIF मा ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो विधि पनि लागू हुन्छ।
चरण 4. अर्को, आवश्यक GIF जानकारी थप्नुहोस्। तपाईं डाउनलोड क्लिक गरेर मात्र आउटपुट बचत गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको सामाजिक मिडिया खाताहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस्।
EZGIF को साथ, तपाईंले GIF हरू मात्र क्रप गर्न सक्नुहुन्न, तर GIF हरूको आकार पनि आफूले मन पराउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, यदि तपाइँको मुख्य लक्ष्य तपाइँको GIF को आकार घटाउने हो भने, अगाडि नहेर्नुहोस्। साथै, उपकरण कुनै पनि वेब ब्राउजर मा काम गर्दछ। मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि, यो उपकरण ठूलो मद्दत हुन सक्छ। तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी iPhone र Android मा GIF क्रप गर्ने सिक्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाइँ सामान्यतया पीसीमा गर्नुहुन्छ। यहाँ पछ्याउन केहि चरणहरू छन्:
चरण 1. तपाईले सामान्यतया प्रयोग गर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र उपकरणको आधिकारिक पृष्ठमा जानुहोस्।
चरण 2. त्यसपछि विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् काट्नुहोस् मेनुबाट र यो अर्को प्यानलमा जान्छ जहाँ तपाइँ GIF अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थिच्नुस छनौट गर्नुहोस् फाइल र GIF फाइल अपलोड गर्नुहोस्
चरण 3. अपलोड गरेपछि, उपकरणले GIF बारे जानकारी प्रदान गर्नेछ, विशेष गरी फ्रेमहरू र GIF को कुल अवधि। यदि तपाइँ फ्रेम नम्बर वा समय अनुसार काट्न चाहनुहुन्छ भने छनौट गर्नुहोस्। बाट विकल्पहरू प्यानल, ड्रपडाउन मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र तदनुसार छान्नुहोस्।
चरण 4. अब तपाइँले छनोट गरिएको विधिको आधारमा सुरु र अन्त्य बिन्दुहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, मानौं कि हामीले फ्रेमद्वारा काट्ने छनौट गर्छौं र फ्रेम 10 देखि 16 सम्म काट्ने निर्णय गर्छौं। अर्कोतर्फ, तपाईंले आफ्नो GIF बुश ट्रिमिङ सीपहरू देखाउन र अनावश्यक भागहरू काट्नको लागि यही उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
5 चरण। बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अवधि काट्नुहोस् र त्यसपछि पृष्ठ तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाईंले GIF को पूर्वावलोकन देख्नुहुनेछ। आउटपुट डाउनलोड गर्न, बस क्लिक गर्नुहोस् बचत बटन।
यदि तपाइँ सामान्य विधिहरूको सट्टा GIF क्रप गर्न थप उन्नत उपकरण खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Adobe Photoshop ले तपाइँको शुभकामनाहरू पूरा गर्न सक्छ। यो यसको तस्बिर सम्पादन क्षमताहरूको लागि परिचित उपकरण हो। त्यो बाहेक, तपाइँ कुनै पनि कठिनाइ बिना GIF क्रप गर्न वा क्रप गर्न फोटोशप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पनि GIF हरू कोर्न चाहनुहुन्छ भने, यो आवश्यकताको लागि एक उत्तम उपकरण हो। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि, हामी तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि चरण-दर-चरण प्रक्रिया छोड्छौं।
चरण 1. यदि तपाइँसँग पहिले नै तपाइँको PC मा Photoshop स्थापना छ भने, यसलाई सुरु गर्नुहोस् र GIF लोड गर्नुहोस्।
चरण 2. उपकरणमा GIF अपलोड गर्न, नेभिगेट गर्नुहोस् फाइल > पछि खोल्नुहोस् र आफ्नो हार्ड ड्राइभबाट GIF चयन गर्नुहोस्।
चरण 3. अपलोड पछि, तपाईंले टाइमलाइन विन्डोमा सबै फ्रेमहरू देख्नुपर्छ। यहाँबाट, तपाईंले मेटाउन चाहनुभएको फ्रेमहरू चयन गर्नुहोस् र फ्रेमहरू तलको मेनुमा रद्दीटोकरीमा क्लिक गर्नुहोस्।
चरण 4. आफ्नो काम बचत गर्नु अघि, तपाईंले ट्याप आइकनमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण GIF पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइलमा जानुहोस्> निर्यात> वेब (विरासत) को लागी बचत गर्नुहोस् र GIF चयन गर्नुहोस् र अन्तमा, प्रक्रिया समाप्त गर्न बचत बटन क्लिक गर्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम
यदि तपाईसँग भएका विकल्पहरू तपाईलाई अझै स्पष्ट छैन भने, हामी तपाईलाई अन्तिम खण्डको साथ छोड्छौं जहाँ तपाईले ती आवश्यकताहरू र यस सम्बन्धमा तपाईका शंकाहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ हामी तपाईंलाई GIF क्रप गर्नका लागि उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू देखाउँछौं।
Kapwing GIF सम्पादकहरू अनलाइन प्रयोग गर्न सजिलो मध्ये एक हो, जुन नि:शुल्क सम्पादन सेवा प्रदान गर्दछ भिडियोहरू, छवि सम्पादन, मेम उत्पादन, आदि। तपाईं कुनै पनि समस्या बिना Kapwing संग gif क्रप गर्न सक्नुहुन्छ।
Gifgifs ले तपाईलाई धेरै टेम्प्लेटहरूसँग निःशुल्क gif एनिमेसनहरू प्रदान गर्दछ, र GIF हरू र छविहरू सम्पादन गर्ने क्षमताको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यदि तपाइँ GIF अनलाइन क्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई नछुटाउनुहोस्।
Iloveimg यसको लागि प्रसिद्ध छ बहुमुखी छवि सम्पादन क्षमता, र यसले सम्पादन पछि छविको गुणस्तर परिवर्तन गर्दैन। त्यसैले क्रप गरेपछि तपाईको GIF को गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
तपाईले देख्नु भएको होला, GIF क्रप गर्नु एकदम सरल छ, तपाईले गर्नु पर्ने भनेको हामीले संकेत गरेका चरणहरू पछ्याउनुहोस् र विभिन्न विकल्पहरू प्रयास गर्नुहोस्। साथै, यदि तपाइँ ब्राउजिङ र अनुसन्धान जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ यस स्रोतको लागि अवस्थित हजारौं उपकरणहरू महसुस गर्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » GIF कसरी काट्ने
रेस्टुरेन्ट मेनु उदाहरणहरू
स्पेनमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित डिजाइन एजेन्सीहरू